၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Gaming Phone တွေ ဘာ့ကြောင့် ရေပန်းစားလာမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
376 Shares 141 Views
စမတ်ဖုန်းတွေ ပေါ်လာကတည်းက အဲဒီ ဖုန်းတွေအတွက် ဂိမ်းများလည်း ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်း ကစားဖို့အတွက် အထူး ဖန်တီးထားတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ အခုမှ စတင် ထွက်လာတာပါ။ ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံး ထွက်လာတဲ့ Razer Phone ဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ Xiaomi Black Shark နဲ့ Nubia Red Magic တို့ကလည်း အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ပြိုင်ဖက်များ ထွက်လာဦးမှာပါ။ Gaming Phone တွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ရေပန်းစားလာမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် ကဏ္ဍသုံးခုကို စဉ်းစားရမှာပါ။ အဲဒါတွေကတော့ ဖုန်း၊ ဂိမ်းနဲ့ ကစားမယ့် လူများ ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းရည်မြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီဇိုင်း
Gaming Phone တွေဟာ တကယ်တော့ အခုမှ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ စမတ်ဖုန်းလိုရော ဂိမ်းစက်လိုပါ သုံးနိုင်တဲ့ Nokia N-Gage ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း Xperia Play နဲ့ Acer Predator6တို့ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် လူကြိုက်များခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနှစ်မှာ ထွက်လာတဲ့ ဂိမ်း ဖုန်းများဟာ ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်များကို ထည့်သွင်းပေးထားတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Specs များကို ကြည့်ရင် Trend အသစ်တစ်ခုကို မြင်ရပါတယ်။ Nubia Red Magic နဲ့ Xiaomi Black Shark တို့မှာဆိုရင် 6GB RAM , 64GB Storage ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ စွမ်းရည်မြင့် မော်ဒယ်မှာ 8GB RAM , 128GB Storage တောင် ပါပါတယ်။ Razer Phone မှာ 8GB RAM, 64GB Storage ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Black Shark မှာတော့ ဒီနှစ်ထုတ် Snapdragon 845 Processor ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Red Magic ကတော့ ယခင်နှစ်ထုတ် Snapdragon 835 ကို သုံးထားပါတယ်။ Red Magic ဟာ ဘက်ထရီ အပိုင်းမှာ အခြားဖုန်း နှစ်လုံးရဲ့ 4000mAh ထက် အားနည်းတဲ့ 3800mAh ကို ထည့်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းသုံးလုံးရဲ့ Specs များကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအားလုံးမှာ တူညီတာကတော့ စွမ်းရည်မြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို ထည့်ပေးထားတာပါ။
ဒီဇိုင်းအပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Black Shark နဲ့ Red Magic တို့ဟာ Razer ထက် ထူးခြားနေပါတယ်။ Black Shark ရဲ့ ဒီဇိုင်းက ဂိမ်မာများအတွက် အလွန် စွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ Red Magic ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာလည်း RGB Light Strip နဲ့ ဖောင်းကြွ ဒီဇိုင်းများက လှပဆန်းသစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဂိမ်း ဖုန်းများဟာ ယနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်း ဒီဇိုင်းများကနေ ခွဲထွက်နေပါတယ်။ ဒီလို ခွဲထွက်နေတာကလည်း အကြောင်းအရင်း ရှိပါတယ်။ ဂိမ်း ဖုန်းများမှာ အဆင့်မြင့် အအေးပေး စနစ်များကို ထည့်သွင်းထားကြသလို လက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိစွာ ကစားနိုင်အောင်လည်း ဖန်တီးထားကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်မာများဟာ ဂိမ်းထဲမှာပါတဲ့ သိပ္ပံ ဆန်ဆန် ဒီဇိုင်းများကို နှစ်သက်ကြလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S9 Plus , Huawei P20 Pro , Pixel2XL တို့မှာလည်း ဘယ်လို ဂိမ်းမျိုးကို မဆို ချော မွတ်စွာ ကစားနိုင်တဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲများ ထည့် ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇိုင်း အပိုင်းနဲ့ အချို့ဟာ့ဒ်ဝဲများဟာ ဂိမ်း ဖုန်းများကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။
Razer Phone မှာ 120hz Screen ပါတဲ့အတွက် စွမ်းရည်မြင့် ဂိမ်းများကို ချောမွတ်စွာ ကစားနိုင်ပါတယ်။ Black Shark ကိုတော့ Gamepad နဲ့ တွဲဖက် ကစားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ Red Magic မှာ ထူးခြားတဲ့ အအေးပေးစနစ်နဲ့ Gameboost စွမ်းရည် ပါပါတယ်။
အရင်ကတော့ ပီစီနဲ့ ဂိမ်းစက်များမှာသာ ကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းများဟာ အခုဆိုရင် အန်းဒရွိုက် ဖုန်းများမှာပါ ကစားလာနိုင်ကြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့် Rayark ရဲ့ နာမည်ကျော် Implosion : Never Lose Hope ကို Nintendo Switch , Android , iOS Device များမှာ ကစားနိုင်ပါပြီ။ နောက်ထပ် နာမည်ကျော် Fortnite ဟာလည်း PC, Console နဲ့ မိုဘိုင်း ကိရိယာများမှာ ကစားနိုင်ပါပြီ။ ပီစီနဲ့ ဂိမ်းစက် ဂိမ်းအဟောင်း များစွာကိုလည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ မိုဘိုင်းအတွက် ဖန်တီးလာကြပါပြီ။ PUBG, Dungeon Hunter Champions, Shadowgun Legends တို့လို အက်ရှင်ဂိမ်းများကို မိုဘိုင်းအတွက် ဖြန့်ချီလိုက်ခြင်းဟာလည်း ဂိမ်း ဖုန်းများ ရေပန်းစားလာမယ့် အချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
Gaming Phone တွေကို ဘယ်သူတွေ ၀ယ်ယူကြမလဲ ?
အတိုချုပ်ပြောရရင် တရုတ်ပါ။ Xiaomi Black Shark နဲ့ Nubia Red Magic တို့ဟာ တရုတ် ကုမ္ပဏီများကနေထွက်ပေါ်လာတာ တိုက်ဆိုက်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်း ဂိမ်း ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဟာ အစသာရှိပါသေးတယ်။ PUBG, Fortnite တို့ နာလည်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အခြား နိုင်ငံများမှာလည်း ဂိမ်း ဖုန်းများဟာ လူကြိုက်များလာမှာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ Gaming Phone တှေ ဘာ့ကွောငျ့ ရပေနျးစားလာမလဲ ?
စမတျဖုနျးတှေ ပျေါလာကတညျးက အဲဒီ ဖုနျးတှအေတှကျ ဂိမျးမြားလညျး ထှကျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂိမျး ကစားဖို့အတှကျ အထူး ဖနျတီးထားတဲ့ ဖုနျးတှကေတော့ အခုမှ စတငျ ထှကျလာတာပါ။ ဒီနှဈမှာ ပထမဆုံး ထှကျလာတဲ့ Razer Phone ဟာ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့နောကျမှာ Xiaomi Black Shark နဲ့ Nubia Red Magic တို့ကလညျး အပွိုငျအဆိုငျ ပျေါထှကျလာပါတယျ။ နောကျထပျလညျး ပွိုငျဖကျမြား ထှကျလာဦးမှာပါ။ Gaming Phone တှဟော ဘာ့ကွောငျ့ ရပေနျးစားလာမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ဖွဖေို့အတှကျ ကဏ်ဍသုံးခုကို စဉျးစားရမှာပါ။ အဲဒါတှကေတော့ ဖုနျး၊ ဂိမျးနဲ့ ကစားမယျ့ လူမြား ဖွဈပါတယျ။
စှမျးရညျမွငျ့ ဟာ့ဒျဝဲနဲ့ စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ဒီဇိုငျး
Gaming Phone တှဟော တကယျတော့ အခုမှ ပျေါလာတာ မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ စမတျဖုနျးလိုရော ဂိမျးစကျလိုပါ သုံးနိုငျတဲ့ Nokia N-Gage ပျေါခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အောငျမွငျမှု မရခဲ့ပါဘူး။ နောကျပိုငျးမှာလညျး Xperia Play နဲ့ Acer Predator6တို့ ထှကျခဲ့ပမေယျ့ လူကွိုကျမြားခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနှဈမှာ ထှကျလာတဲ့ ဂိမျး ဖုနျးမြားဟာ ဂိမျးကစားဖို့အတှကျ ထူးခွားတဲ့ စှမျးရညျမြားကို ထညျ့သှငျးပေးထားတာက စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့ Specs မြားကို ကွညျ့ရငျ Trend အသဈတဈခုကို မွငျရပါတယျ။ Nubia Red Magic နဲ့ Xiaomi Black Shark တို့မှာဆိုရငျ 6GB RAM , 64GB Storage ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ စှမျးရညျမွငျ့ မျောဒယျမှာ 8GB RAM , 128GB Storage တောငျ ပါပါတယျ။ Razer Phone မှာ 8GB RAM, 64GB Storage ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
Black Shark မှာတော့ ဒီနှဈထုတျ Snapdragon 845 Processor ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ Red Magic ကတော့ ယခငျနှဈထုတျ Snapdragon 835 ကို သုံးထားပါတယျ။ Red Magic ဟာ ဘကျထရီ အပိုငျးမှာ အခွားဖုနျး နှဈလုံးရဲ့ 4000mAh ထကျ အားနညျးတဲ့ 3800mAh ကို ထညျ့ထားပါတယျ။ အဲဒီ ဖုနျးသုံးလုံးရဲ့ Specs မြားကို အောကျမှာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးအားလုံးမှာ တူညီတာကတော့ စှမျးရညျမွငျ့ ဟာ့ဒျဝဲမြားကို ထညျ့ပေးထားတာပါ။
ဒီဇိုငျးအပိုငျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ Black Shark နဲ့ Red Magic တို့ဟာ Razer ထကျ ထူးခွားနပေါတယျ။ Black Shark ရဲ့ ဒီဇိုငျးက ဂိမျမာမြားအတှကျ အလှနျ စှဲဆောငျမှု ရှိပါတယျ။ Red Magic ရဲ့ အနောကျဘကျမှာလညျး RGB Light Strip နဲ့ ဖောငျးကွှ ဒီဇိုငျးမြားက လှပဆနျးသဈပါတယျ။
အဲဒီ ဂိမျး ဖုနျးမြားဟာ ယနခေ့တျေ စမတျဖုနျး ဒီဇိုငျးမြားကနေ ခှဲထှကျနပေါတယျ။ ဒီလို ခှဲထှကျနတောကလညျး အကွောငျးအရငျး ရှိပါတယျ။ ဂိမျး ဖုနျးမြားမှာ အဆငျ့မွငျ့ အအေးပေး စနဈမြားကို ထညျ့သှငျးထားကွသလို လကျထဲမှာ သကျတောငျ့သကျသာရှိစှာ ကစားနိုငျအောငျလညျး ဖနျတီးထားကွလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဂိမျမာမြားဟာ ဂိမျးထဲမှာပါတဲ့ သိပ်ပံ ဆနျဆနျ ဒီဇိုငျးမြားကို နှဈသကျကွလို့လညျး ဖွဈပါတယျ။
Samsung Galaxy S9 Plus , Huawei P20 Pro , Pixel2XL တို့မှာလညျး ဘယျလို ဂိမျးမြိုးကို မဆို ခြော မှတျစှာ ကစားနိုငျတဲ့ ဟာ့ဒျဝဲမြား ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဇိုငျး အပိုငျးနဲ့ အခြို့ဟာ့ဒျဝဲမြားဟာ ဂိမျး ဖုနျးမြားကို မယှဉျနိုငျပါဘူး။
Razer Phone မှာ 120hz Screen ပါတဲ့အတှကျ စှမျးရညျမွငျ့ ဂိမျးမြားကို ခြောမှတျစှာ ကစားနိုငျပါတယျ။ Black Shark ကိုတော့ Gamepad နဲ့ တှဲဖကျ ကစားနိုငျအောငျ ဖနျတီးထားပါတယျ။ Red Magic မှာ ထူးခွားတဲ့ အအေးပေးစနဈနဲ့ Gameboost စှမျးရညျ ပါပါတယျ။
အရငျကတော့ ပီစီနဲ့ ဂိမျးစကျမြားမှာသာ ကစားနိုငျတဲ့ ဂိမျးမြားဟာ အခုဆိုရငျ အနျးဒရှိုကျ ဖုနျးမြားမှာပါ ကစားလာနိုငျကွပါပွီ။ ဥပမာအားဖွငျ့ Rayark ရဲ့ နာမညျကြျော Implosion : Never Lose Hope ကို Nintendo Switch , Android , iOS Device မြားမှာ ကစားနိုငျပါပွီ။ နောကျထပျ နာမညျကြျော Fortnite ဟာလညျး PC, Console နဲ့ မိုဘိုငျး ကိရိယာမြားမှာ ကစားနိုငျပါပွီ။ ပီစီနဲ့ ဂိမျးစကျ ဂိမျးအဟောငျး မြားစှာကိုလညျး အခုနောကျပိုငျးမှာ မိုဘိုငျးအတှကျ ဖနျတီးလာကွပါပွီ။ PUBG, Dungeon Hunter Champions, Shadowgun Legends တို့လို အကျရှငျဂိမျးမြားကို မိုဘိုငျးအတှကျ ဖွနျ့ခြီလိုကျခွငျးဟာလညျး ဂိမျး ဖုနျးမြား ရပေနျးစားလာမယျ့ အခကျြမြား ဖွဈပါတယျ။
Gaming Phone တှကေို ဘယျသူတှေ ဝယျယူကွမလဲ ?
အတိုခြုပျပွောရရငျ တရုတျပါ။ Xiaomi Black Shark နဲ့ Nubia Red Magic တို့ဟာ တရုတျ ကုမ်ပဏီမြားကနထှေကျပျေါလာတာ တိုကျဆိုကျမှု မဟုတျပါဘူး။ တရုတျဟာ ကမ်ဘာမှာ အကွီးမားဆုံး အှနျလိုငျး ဂိမျး ဈေးကှကျဖွဈပါတယျ။ တရုတျဟာ အစသာရှိပါသေးတယျ။ PUBG, Fortnite တို့ နာလညျကွီးလာတာနဲ့ အမြှ အခွား နိုငျငံမြားမှာလညျး ဂိမျး ဖုနျးမြားဟာ လူကွိုကျမြားလာမှာပါ။